Wararka Maanta: Isniin, May 9 , 2022-Xildhibaannada lagusoo doortay Garbahaareey oo ka horyimid go'aanka guddoomiyaha barlamaanka
Xubno kamid ah xildhibaannada Garbahaareey oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho,ayaa cambaareeyay go’aanka guddoomiyaha, waxayna ku tilmaameen go’aan dowladdo shisheeye ay usoo dhiibeen.
“Ma ahayn go’aanka Sheikh Aadan aan ka sugaynay, inuu ahaa go’aan uu mediyaha noosoo marinayo. Arrintaan waa matalaadii gobolka Gedo. Sheikh Aadan nooma soo marin kartid Mediyaha, waa in la isisoo hor fariistaa oo laga wada hadlaa,” ayuu yiri mid kamid ah xildhibaannada Garbahaareey lagusoo doortay.
Xildhibaannadan ayaa weli ku adkaysanaya inay ku yimaadeen hab waafaqsan heshiiskii doorasho ee 17 september islamarkaana waxay shegeen in ay ka qeyb galidoonaan fadhiyada soo socda ee barlamaanka.
Guddoomiyaha barlamaanka ayaa maalmo ka hor sheegay in xildhibaan aan sharciyad haysanin uusan mar dambe soo fariisandoonin hoolka barlamaanka, kadib labo maalmood oo fadhiyada barlamaanku hareereeyeen buuqa xildhibaannada Gedo.
5/9/2022 1:52 PM EST